Inqilaab keliya oo hadda joojin kara dib u doorashada madaxweyne Farmaajo - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Inqilaab keliya oo hadda joojin kara dib u doorashada madaxweyne Farmaajo
Markaad maqasho Inqilaab waxaad is weydiin kartaa sidee Somaliya uga dhici karaa ayadoo ay joogaan askar ajaaniba oo Afrikaana oo hubka waaweyn ee aan loo ogoleyn qaranka ku eryaday argagixisadii uu ka mid ahaa fadhiid Shariif Sh Axmed iyo Axmed Madoobe.
Waxaadse maanta aad aragteen inayna cidan daah ka saarneyn cida ka wada Muqdisho banaanbaxyada ay tahay kooxda sheegata beesha caalamka oo rabta in doorashada aanu ka qayb gelin madaxweynaha hadda talada haya.
”Horaan u sheegnay inay rabaan inay doorashada iyagu la wareegaan kuna qabtaan XALANE oo ah sida ay ugu dambeyn ay rabeen oo ah in XAMAR la qaso kadibna la yiraa dalka xaaladiisa ayaa ka sii dartey, kadibna sidaa inqilaab ku ridaan ayuu qabaa Cali Calasow.
Haddii ay taas ku dhaqaaqaan waxaan shaki ku jirin in hal habeen lagu degi doono ayuu raaciyay Cali Calasow layskuna dari doono iyaga iyo kooxda sheegata madasha musharixiinta oo og inayna marnaba soo baxayn.
Waxaa maanta iyaguna isba qarinba Imaaraadka oo yiri xaalada dalkaa ka sii dartey, ayadoo Kiiniya hore u sheegtay in Farmaajo uu joogo meel ay la rabeen oo ah sida ay qabeen inmudadii ka dhmaatey.
Isku soo duuboo waxaad hore u ogeydeen in kooxdan sheegata beesha caalamka ay sheegeen inayna ogolaan doonin in laga boodo labada shaqsi ee ay dabada ka wadaan ee horjooge Siciid Deni iyo Axmed Madoobe oo iyagu lugu adag ku joojin.